Remote Service | Samsung Myanmar
Service Center သို့ သွားရောက််ရန်မလိုအပ်ခြင်းဖြင့် အဖိုးတန်အချိန်များကို ချွေတာလိုက်ပါ။
Remote Service ဆိုတာဘာလဲ?
Samsung Call Center သို့ခေါ်ဆို၍ ကျွမ်းကျင်သော Samsung Customer Service Agentများမှ လူကြီးမင်းတို့၏ဖုန်းတွင်ကြုံတွေ့နေရသည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့်ပတ်သက်သော အခက်အခဲများအား တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှု ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။
Remote Service ဖြင့်ပြုလုပ်ပေးနိုင်သော
- Data များရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊ Data Backup ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်း
- Feature အသစ်အသုံးပြုပုံများအား ရှင်းပြပေးနိုင်ခြင်း
- Software နှင့် Application များ Update ပြုလုပ်ပေးခြင်း
- Setting မှားယွင်းပြောင်းလဲမိ၍ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများအား ဖြေရှင်းပေးခြင်း
Remote Service ၏ အားသာချက်များ
- Customer Service Agent နှင့်အတူတူရှိနေသကဲ့သို့ တိုက်ရိုက်ပြောဆိုအကူအညီရယူနိုင်ခြင်း
- ဖုန်း၏ Settingနှင့် Featureများအတွက် အကောင်းဆုံးအကြံညာဏ်များရယူနိုင်ခြင်း
- လုပ်ဆောင်ပုံအဆင့်ဆင့်တို့ကို မိမိဖုန်းScreenပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
Remote Service အသုံးပြုရန် လိုအပ်ချက်များ
- သင်၏ဖုန်းသည် အနည်းဆုံး Android 2.4 (ICS) ဗားရှင်းဖြစ်ရမည်။
- သင်၏ဖုန်းတွင် ကောင်းမွန်သော အင်တာနက်လိုင်းရှိရမည်။
- သင်၏ဖုန်းတွင် Smart Tutor Application သွင်းထားရမည်။
Remote Service အသုံးပြုနည်း
Smart Tutor Application အား Install ပြုလုပ်ခြင်း
၁. Google Play Store သို့မဟုတ် Samsung Galaxy Apps မှ Smart Tutor Application အားအခမဲ့ ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်၍ Install ပြုလုပ်ပါ။
၂. Smart Tutor App ထဲသို့ဝင်ပါ။
၃. ဆော့ဖ်ဝဲလ် နှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များဖတ်ရှုပြီးနောက် OK ကိုနှိပ်ပါ။
၄. သုံးစွဲသူနှင့်ပတ်သက်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုဖတ်၍ သဘောတူပါက အမှန်ခြစ်ပြီး Agree ကိုနှိပ်ပါ။
၅. အကယ်၍ Update ပြုလုပ်ခိုင်းပါကဖုန်း Screen တွင်ပေါ်လာသောညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်၍ Update ပြုလုပ်လိုက်ပါ။
Samsung Customer Service agent ကိုဆက်သွယ်ခြင်း
၆. Remote Service အသုံးပြု၍ အကူအညီရယူရန် Samsung Call Center နံပါတ် ၀၁-၂၃၉၉၈၈၈ သို့ဆက်သွယ်၍ Customer Service Agent အား မိမိကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲကို Remote Service ဖြင့် အကူအညီရယူလိုကြောင်း အသိပေးပြောကြားပြီးနောက် လျှို့ဝှက်နံပါတ် ၆ လုံးအား မေးမြန်းရယူပါ။
၇. Samsung Customer Service Agent မှပေးသော လျှို့ဝှက်နံပါတ် ၆ လုံးအား Smart Tutor Appတွင် ထည့်သွင်းပါ။
(၈). Remote Service ဖြင့်ချိတ်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။
အချက်အလက်လုံခြုံမှုအတွက် ဖော်ပြပေးမည့် စာသား
Customer Service Agent မှ Remote Service ပြုလုပ်ရာတွင် လူကြီးမင်း၏ ဖုန်း Setting တစ်ခုထဲကိုသာ ချိတ်ဆက်ခွင့်ရှိပါသည်။ အကယ်၍ လိုအပ်ချက်အရ လူကြီးမင်း၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်သော ‘Message’, ‘Phonebook’, ‘Gallery’ , ‘Camera’ စသည့် Application များကို ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်လာပါက လူကြီးမင်း၏ဖုန်းတွင် အသိပေးသော Message ပေါ်လာပြီး လူကြီးမင်း၏ ခွင့်ပြုချက်ကို တောင်းခံမှာဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်း၏ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ချိတ်ဆက်၍ မရနိုင်ပါ။
ကနဦးအဆင့်တွင် Agent အား Screen မြင်ရစေရန်ခွင့်ပြုပေးထားသည့်တိုင်အောင် လူကြီးမင်း၏ ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်တစ်ခုခုကို ဖျောက်ထားလိုပါကလူကြီးမင်း၏ ဖုန်း Screen အားတစ်ဖက်မှ Agent မမြင်ရအောင် ကွယ်ဖျောက်ထား၍ ရပါသည်။
၁. Notification bar အားဆွဲချ၍ Smart Tutor Connection အားနှိပ်ပါ။
၂. ထို့နောက် Lock menu ကိုတွေ့မြင်ပါလိမ့်မည်။
၃. ထို Lock Menu ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါက "UNLOCKED" ဟုပြပြီး မိမိ Screen အား တဖက် Agent မှမြင်တွေ့ရတော့မည်မဟုတ်ပါ။